Lambarka Maaliyadeed Ee Uu Gareth Bale U Xiran Karo Tottenham Oo Durbaba La Sii Ogaaday Xilli Uu Premier League Ku Soo Laabanayo – Laacibnet.net
Lambarka Maaliyadeed Ee Uu Gareth Bale U Xiran Karo Tottenham Oo Durbaba La Sii Ogaaday Xilli Uu Premier League Ku Soo Laabanayo
Gareth Bale ayaa mar walba ka dhex muuqday suuqa kala iibsiga sannadihii ugu danbeeyay laakiin waxay u muuqataa in xagaagan ugu danbeyn xal laga gaarayo mustaqbalkiisa Real Madrid.
Madaama uu dheeri ku noqday ciyaartoyda uu u baahan yahay tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane, Tottenham ayaa wadahadal kula jirta kooxda reer Spain sidii ay xiddigeedii hore ugu soo celin laheyd Waqooyiga London.
Bale ayaa muddo dheer lala xiriirinayay inuu ku laabanayo Spurs laakiin sababo dhaqaale darteed ayuu u dhaqangeli waayay heshiiskaas laakiin haatan waxaa jirta fursad ay amaah kula soo wareegi karaan.
Bale ayaa ka tagay Tottenham sannadkii 2013 isagoo ku soo guuleystay afar Champions League, labo La Liga, seddex Club World Cup iyo koobab kale mudadii uu joogay Los Blancos.
Inkastoo Manchester United sidoo kale lala xiriiriyay saxiixa Bale hadana Spurs ayaa ku dhow saxiixiisa laakiin lambarkee ayuu u xiran doonaa kooxda Tottenham?
Lambarkiisii hore ee No.11 waxaa haatan xiran Erik Lamela, laakiin waxaa jira lambar kale oo uu hore u xiran jiray oo diyaar u ah.
Mid ka mid ah lambaradii hore ee uu Tottenham u xiran jiray waxaa ka mid ah maaliyada No.3 taasoo diyaar ah ka dib markii Danny Rose laga ceyriyay kooxda.
Xiddiga Ingariiska ayaa ogaaday inuusan qeyb ka aheyn liiska ciyaartoyda Tottenham ee lambarada la siiyay, wuxuuna ku dhow yahay inuu isaga tago kooxda Jose Mourinho.
Rose ayaa qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii la soo dhaafay amaah ku joogay Newcastle United, waxaana haatan lala xiriirinayaa kooxda horyaalka Serie A ka dhisan ee Genoa.
Lambar kale oo uu Gareth Bale u xiran karo Tottenham waa maaliyada No.9 oo xiddigii ugu danbeeyay ee Tottenham u xirta uu ahaa Vincent Janssen sannadkii hore.
Roberto Soldado iyo Roman Pavlychuenko ayaa labaduba ku guuldareystay inay maaliyadaan magac u yeelaan mudadii ay joogeen Tottenham iyadoo xiddigii ugu danbeeyay ee ku guuleysta lambarkaan uu ahaa Dimitar Berbatov in ka badan 10 sannadood ka hor.
Bale ayaa noqon kara xiddiga cusub ee maaliyada No.9 ee Tottenham madaama uu leeyahay awood gooldhalin oo weyn islamarkaana uu yahay xiddig magac weyn ka leh dunida.